तपाईंले कति मूल्यको फोन बोक्नुहुन्छ ? आफ्नो फोन निकै महँगो छ भनेर घमण्ड गर्नुहुन्छ ? यदि गर्नुहुन्छ भने एकपटक सोच्नुहोस् ।
किनकि यो संसारमा केही त्यस्ता फोन छन् जसको मूल्य करोडौँ रुपैयाँ पर्दछ, जुन आम सर्वसाधारणको कल्पनाभन्दा पनि बाहिर हुन्छ ।
अहिले बजारमा रहेका विश्वका सबैभन्दा महंगा मोबाइल फोनमध्ये टपटेन महँगा फोनको सूची यस्तो छ :
१०. Virtue Signature Cobra : तीन लाख १० हजार डलर मूल्यको यो फोन विश्वको दशौँ सबैभन्दा महँगो फोन हो । भर्चु कम्पनीको यो डिजाइनको फोन जम्मा ८ वटामात्र उत्पादन गरिएको छ । फ्रेन्च कम्पनी बोचेरोन भर्चु कम्पनीले डिजाइन गरी बेलायतमा हस्तनिर्मित यो फोनमा सुन लेपन गरिएको छ । यसमा ४३० वटा रुबी प्रयोग गरिएको छ । यो फोन पनि केबल ८ वटामात्र उत्पादन गरिएको छ ।
एसईई अर्थात् माध्यमिक शिक्षा परिक्षा दिएर बसेका छात्राहरुमा केन्द्रित रहेर संचालन गरिएको मिस एसईई आइडल २०१७ नामक प्रतिस्पर्धामा भिअर च्वाईस र मस्ट ट्यालेन्टेड अवार्ड सहित अनुषा राईले विजेताको ताज पहिरिन सफल भएकी छिन् ।
साउन, १८ ठोरी ठोरीकी रञ्जु अधिकारीले मोडलिङमा आफ्नो क्यारियर सुरुवात गरेकी छिन् । काठमाण्डौमा रहेर व्यापार व्यवसाय सञ्चालन गर्दै आएकी रञ्जुले म्यूजिक भिडियो मार्फत आफ्नो मोड्लिङ्ग क्यारियर सुरु गरेकी हुन् ।
अन्तर्मुखी स्वभावकी छु, स्टेजमा जे–जस्तो देखिन्छु त्यो मभित्र दबिएर बसेको कुरा प्रस्फुटन भएर बाहिर आएको हो । संघर्षको फल मीठो हुँदो रहेछ ।
महिलाहरुले मात्रै मिलेर खोलेको सहकारीले पनि समाजमा प्रशंशनीय काम गरेको छ । सहकारी मार्फत खास गरी ग्रामीण भेगका मधेशी महिलाहरुले राम्रो प्रगती गरेका छन् ।
जाडोमा आफ्नो छालाको हेरविचार कसरी गर्ने र आफनो सुन्दरतालाई अझ निखार्न के के गर्नुपर्छ जानि राखौं.....।
पहिले आफनोलागि निर्णय लिन दश पटकसम्म सोच्ने महिलाहरु अहिले भने चुनावमा भोट हाल्ने बारे घरपरिवारमा बसेर छलफल गर्ने र कसैको करकापमा नभई स्वतन्त्र रुपमा आफैले निर्णय लिने क्षमताको विकास गरीसकेका छन् ।